Kan sameeyey Movie for Windows 7: Samee Home Movie in Minutes
Sida loo abuuro cajiib Home Movies Si fudud in Windows 7
> Resource > Windows > Sida loo abuuro Si fudud Movies Home cajiib ah in Windows 7
Qaadashada sawiro iyo video waa badan ka sahlan tahay ka hor, gaar ahaan qalabka Xararad. Waxaa laga yaabaa inaad u ururay badan oo footage on kaadhka xusuusta ama on your computer. Halkii iyaga waxaa wax cunaya ilaa meel aad kaydinta, waxaad samayn kartaa filimada il-qabad ka da.ay aad video clips si aad u hesho nolosha oo dhan xuska ama la wadaagto caalamka oo dhan ah. In this article, a gaare movie wanaagsan u Windows 7: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxaa loo soo bandhigay inuu kaa caawiyo inaad la abuuro filimada guriga ku daqiiqo. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Windows 7 hore oo kale.
Tani software video tafatirka for Windows 7 sameeya oo dhan itusi video aasaasiga ah sida video timmaha, warejin, image / gol leeyahay dhawaaq, asalka music galinta, iwm Waxaa sidoo kale soo saartaa xirfad-raadinta videos iyadoo la siinayo lacagta oo ballaaran kala guurka iyo saamaynta, abuurista picture- in-sawir, usii-wareeg, saamayn ku dhow-up in hab fudud. Raac hoos ku hage in ay bartaan sida loo sameeyo filimada guriga laga cabsado in Windows 7.
1 dejinta aad files warbaahinta
Ka dib markii ay ku rakibidda editor video loogu talogalay Windows 7, guji icon desktop-ka si loo bilaabo barnaamijkan. Markaas dooro "4: 3" ama "16: 9" inuu galo suuqa kala hoose. Barnaamijkan wuxuu ka yimaadaa aad u dareen leh, oo sidaas daraaddeed waxaad ka heli doontaa waxa quruxsan fudud si ay u fasiraan iyo aad u bilowdo. Si aad u dajiyaan aad video clips, waxaad sidoo kale riixi kartaa "Import" ama jiitaa sii jeedi oo iyaga si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin, waxaad ka heli kartaa iyaga soo bandhigay sida thumbnails in shayga saxaarad bidix. Hadda jiidi oo iyaga hoos u Timeline kala waafaqsan.
2 Tafatir video oo dhan qalab ku anfacaya
Marka dhammaan faylasha soo galay meel, waxa aad bilaabi kartaa in ay sameeyaan wax caadi ah itusi video sida falinjeeerka, lana siii, qoqobada, qaybsama, jarida, midabka qabsado, isagoo intaa ku daray music soo jeeda, bedesho ciyaaro xawaaraha, mugga, garoonka, iwm Tan iyo markii ay bixiso Timeline ah iyo tafatirka guddi u sax video tafatirka, dhammaan hawlaha fudud lagu gaari doonaa waqti. Ogsoonow in zoomer Timeline waa mid wax tar leh marka aad rabto inaad sooman tahay helo boos ee video clip ah.
3 Enhane aad video la 300+ saamaynta
Ka sokow dhammaan qalabka tafatirka caadi ah, gaare movie for Windows 7 ayaa sidoo kale siisaa tiro ballaaran ee saamaynta, kala guurka, Intro / credits, qoraalo, codad muuqaal ah, iwm si aad video dheeraad ah oo soo jiidasho badan. Oo dadkii oo dhammu saamaynta loo isticmaali doonaa in click fudud ama si toos ah jiitaa-iyo-dhibic. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad dalbato saamayn gaar ah sida Snow, Rainbow, Naarta, iwm si aad video, kaliya jiidi oo hoos u dhac aad u codsato waa in keliya qayb ka mid ah sawir ama video clip oo dhan.
Ogsoonow in aad si deg deg ah ku eegaan karo wax laga badbadeley iyo videos daaqad dhinac-ilaa-dhinac ah si loo kontoroolo waxtarkii-waqtiga dhabta ah.
4 Save iyo wadaagno movie
Masterpiece Your ku dhameysatay si toos ah wadaagi karto saaxiibadaa on YouTube, Facebook, Twitter oo aan editor video loogu talogalay Windows 7. Sidoo kale ka tago, waxaad badbaadin kartaa abuurkiinna qaabab loo jecel yahay dad badan oo kale AVI, MOV, wmv, MPEG, MP4, iyo in ka badan la tayo wanaagsan leh. Waxaa Gubasho in DVD inay si fiican u ilaasho, sidoo kale waa suurto gal. Just ka dhacay Abuur dooro haddii aad doorbidayso, ka dibna la aw si ay u helaan wax soo saarka aad la doonayo.
Waxaa ay mudantahay in la xuso in this video G Windows 7 ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah set oo ah qalab horumarsan: Power Tool si ay u abuuraan filimada guriga xirfadeed. Helaan suuqa kala Power Tool ay xaq u riixaya aad video clip dooro ikhtiyaarka, waxaad codsan kartaa usii-wareeg, humaag, fool-off, ama boodi wada click ah.
Windows DVD Kan sameeyey VS Wondershare DVD Creator
Top 6 Free adda Apps for Windows Phone
Sida loo isticmaalo Windows Media Player sida server DLNA ah
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Windows Vista
Sida loo rakib Windows 7 on SSD